Pikantsarin’ireo Mpifindra-monina Mpanao Biriky Amoron-drano Ao Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Janoary 2017 16:46 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, বাংলা, русский, عربي, Español, Français, Aymara, English
Sary: Zaw Zaw / The Irrawaddy
Nalaina tao amin'ny The Irrawaddy, vohikalam-baovao tsy miankina ao Myanmar, ity lahatsoratra avy amin'i Zaw Zaw ity ary navoakan'ny Global Voices indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Mpifindra monina anatiny miisa 100 mahery isan'andro izay mitady sakafo hohanina isan'andro no mahandro biriky any amin'ny iray amin'ireo toerana fanaovana biriky akaikin'i Don Kone sy Thayet Tapin, tanànakely eo amoron'ny Reniranon'ny Irrawaddy Kaominina Mandalay Patheingyi any Myanmar.
Misy toerana fanaovam-biriky miisa efatra ao amin'io faritra io, ary ahitana fahandroana biriky miisa 20 mahery kely ny toerana tsirairay. Tsy manam-paharoa ireo toeram-piasana ireo satria hita miasa ao avokoa ny fianakaviana iray manontolo, afa-tsy ny zazakely.
Amin'ny tranga sasany, miasa miaraka amin'ny fianakaviany ireo zaza hatramin'ny vao dimy taona raha tokony hilalao na hianatra any an-tsekoly izy ireo.
Mipetraka ao anaty trano bongo, nifindra avy any amin'ny fizaram-paritra hafa ao Mandalay ireo mpifindra monina ka mankany amoron'ny renirano, mba hivelomana.
Ho an'ny ankamaroan ‘ireo fianakaviana ireo, midika ny karama kely sy ny halafosan'ny vidin-tsakafo fa tsy maintsy miasa ny olona rehetra ao aminy. Tsy misy ny fomba hafa mba hanatrarana ny vokatra ilaina sy mba hahazoana ny vola ilaina hanohanana ny fivelomana.
Amin'ny tranga sasany, mangataka karama mialoha any amin'ny mpampiasa azy ireo olon-dehibe mpiasa rehefa marary mandra-pahasitrany. Avy eo, manery ny zanany hiara-niasa aminy izy ireo rehefa tsy afaka mamerina ny vola haingana.
Mahandro biriky eny amoron'ny Reniranon'i Irrawaddy ireo fianakaviana mpifindra monina mandrapahatongan'ny vanim-potoanan'ny orana, rehefa miakatra ny haavon'ny rano ka tsy azo alaina intsony ny tanimanga. Avy eo mifindra any amin'ny toerana fanaovam-biriky hafa—miaraka amin'ny fianakaviany— fehezin'ireo tompon'ny fanaovam-biriky voalaza teo aloha ihany ao amin'ny Kaominina Madaya izy ireo, ary manohy ny ranomody [boribory vetaveta].
Ireto ambany ireto ny sarin'ireo mpiasa mitatitra tanimanga sy misarika ireo biriky vita ao amin'ny toerana fanaovam-biriky akaikin'ny tanànakelin'i Don Kone sy Thayet Tapin.
Saryy: Zaw Zaw / The Irrawaddy